Kusvira mu Office yangu ensuite! – Vanoda Zvinhu
My office is ensuite complete with a bathroom and air conditioning so maidziyirira. Akamuka akaenda mubathroom kunoita clean up all the sp3rm yakanga yazara makumbo nemagaro ese. I got up and ndokuridza music softly pacomputer pangu. Akadzoka anyatsobvisa hembe dzese nebhutsu..apa ndipo pandakazonyatsowona macurves ake and how pretty she really was.Mwana aive akabatana zvinoitisa nyaviri. Aive aine mabroad shoulders nemutsipa murefu wainakidza kukisa-kisa nemazamhu akaumbika ari mahombe mbichana, Kachiuno kake karivery slim uye kadumbu kacho kaine twima
Mahips ake ainge emandevere but not very severe, iwo makumbo acho achiita kunge munhu anotamba ballet nemagaro akita tuck in zvekuti aibuditsa kabako paanosangana nemakumbko. Akandiita teas mbichana achifamba slowly seka supermodel kariparump achiswinger ndokuita about turn pamberi pangu and stopped akabata kachiuno kake akapoza akadaro ndokunditi nekasoft voice “you like what you see” handina kudaira but just smiled and nodded.
Akandipushira netwima long fingers twake kumashure ndokubva ndagara pasvivel chair iya. Akapfugama pasi ndokupukuta mboro yangu neka wet face towel kaakanga atora mubathroom mangu. Akatanga kupukuta zvinyoro nyoro kunge munhu arikugeza chironda. Kakutonhora ketowel iri kakararisa blambi a bit ndokubva atanga kuinanzva nanzva.
Akaimedza yese mukanwa sekuti yakanga yarara ndokutamba nayo mukanwa kunge chembere irikusvisvina sweet yetoffy. Ainge achatoimedza zvese nemachende. Yakatanga kuti vhii-vhii irimukati ndokutanga kumira. Mwana vevanhu akatanga kucarressa mathighs angu uku
achindiblower hands free. Yakatanga kumira iye akati pikerere nayo. Bl00wj00b yemusi uyu yakanga yakapenga. Mboro yangu yakamukira mukanwa make kusvikira isasakwane. Ipapa ndipo paakatanga kuibuditsa mbichana mbichana. Akatanga kulicka shaft yeblambi kunge munhu arikunanzva ice cream irikunyungudika uku achirunner manails ake pazviboda zvangu. Yakanga yamira yapfuura nepaguvhu pangu yachiti tsinga tare-tare. Akadzika nayo shaft yangu ndokuenda kumachende.
Aiti akatora one ball nerurimi rwake obva arisucker in mukanwa gently kunge munhu arikutora kagrape kubva pabunch rese nerurimi, ozotora the other ball. Ukuwo bvudzi rake raitekenyedza tekenyedza mathighs angu as she moved up and down. Izvi zvaimunakidza nekuti ndakasheva choya chose uyezve handichengete bvudzi. Aiti akambonanzva machende ese nechepasi pawo ndaibva ndasunga mhata nekunakirwa ukuwo mboro yobva yadairira. Akazoiti mba neonehand ndokuswedera padyo neni. Akatanga kuirubber rubber pakati pemabr3asts ake achiasquizer together ne the other hand. Mboro yakamira zvekuda kuita kirembu chaiyo. Yakatanga kujuja pr3cum. Aindizvokora nguva yose iyi nemaziso ake akanga arimahombe mbichana achindisekerera
ndikangowona zvigunwe zvekumakumbo zvagonyera mukati kunge munhu abatwa nestroke. I couldn’t believe my luck nemwana akabaka kudai nemaskiri aainge ainawo.
Akasimuka ndokundiudza kuti “It’s my turn Daddy..” Akafolder ma armrest echair yangu ndokutanangira mboro. Akabata head rest yechair neone hand
ndokunangisa blambi pabeche rake rakanga ratota nekuzvimbirira. Akatanga kudzikirira pasi slowly akaibata kusvikira musoro wayo wapinda. Akasiya blambi yangu ndokubatirira bahead rest yechair with both hands ndokutanga kudzika some more. Ndakanzwa mboro ichiglider mupleasure box bit by bit and felt like crying out. Musikana aive aita kakufinyama kumeso apo mboro yaipatsanura beche rake achiyigarira. Akachemerera achidzikachete kusvikira yanyura yese. Akafemurika ndokumbogara akadaro mamuscles ebeche rake achiadjuster. Takatanga kukisana in that position ndichipurizira kumusana kwake iwo mazamhu ake achikweshera pachest yangu mboro irimukati.
The sensation was increadible! Akatanga kurocker back and forth slowly akanditarisa mumaziso chaimo. Ndakamubata chiuno akatanga kukoirira. Ipapo ndakatanga kukoirira mbichana since ndakanga ndakagarirwa. Mwana akatsinzinira ndokutanga kukoirira achisimukira. Aiti akasimukira yobuda half way obva aigarira oikurungira irimukati. Ndakanakirwa zvekuti ndakatanga kuchemerera. Paaikurungirira aibva atswinyirira mboro nemapu55y muscles ake zvandisati ndamboitwa hupenyu hwangu hwese ukuwo machende obva adhonzererwa skin yawo nemagaro ake. Mwana akarova position iyi for
about twenty minutes achimbo chinja sequence yacho. Aimboita up and down for some time, ozoigarira oita back and forth akaita zvekukochekera maoko ese muhuro akaita lean backwards. Ndakatanga kuyamwa minyatso yake yakanga yamira kunge twimboro twevana vadiki ndokutanga kuchemerera.
Ndakamudhonza ndokutanga kulicka ma earlobs ake akamerera musana wese. Pandakazoisa rurimi munzeve yake ndokuvhara imwe yacho nechigunwe changu..mwana wevanhu akatanga kukurungira mboro akandimbundira zvekubuditsa mweya wese ndokutanga kubowa. Kana mboro yakanyatso zara beche
unonzwa mamuscles ese achifamba famba kubva kumuromo kwaro kusvika kuchibereko chaiko. Ndakanzwa mboro yangu kunge yabatwa nemaoko maviri nekutightener kwaakange aita beche rake, Nzwara dzake dziye dzakanzi dyo-oo kumusana wangu, akaholder breath yake ndokutanga kudedera akapoza like that. Pandakango fambisa tounge yangu munzeve make akabva achema kuti Maiiihwwweeeee Kani…oohhhhh baibyy…ohhh ndokubva aclimaxer. Ndakanzwa pu55y yake kuita quiver then ichibva yaloosener ndokubvundirira ichirelaxer. Akabva apera simba.
Feeling this mboro yangu yakabva yawedzera kumira. Hapana chinonaka sekunyatsonzwa mboro ichigirizirwa yese kubva kumusoro kusvika kumachende. Ndakabva ndabata makumbo ake ese by the knees ndokusimuka ndakamutakura kunge murume akabereka kamwana nekumberi. Beche rake rainge ratota zvekuti mboro yangu yakange yakunyatso slida in and out smoothly. Ndaiita wekukandirira mudenga kunge ndirikupepeta zviyo obva adzika ndichimugamha nayo blambi. Akabatirira mutsipa wangu chete uku ndakakochekera makumbo ake pama arms angu takaita zvekuhukirana
Musi uyu stamina yose yakabuda. Ndakarova beche ndichiita rekutossa mudenga kunge mboro yakubuda ndorigama nemboro futi yobva yati ndo-o
kunyura paraidzoka. Ndakapomba zvekuti gambi rakatanga kusura mweya waitrepwa imomo. Ndakambochovha ndokutanga kunzwa mathighs nemabicep akuneta. Akakochekera kudaro ndakabva ndadzika pasi ndokumuradzika nemusana ini ndiripamusoro, makumbo ake akangohukira pamagokora angu ndaita advanced missionery position. Ndakarova beche sebeche neposition iyi richingodaira kuti kwapu-kwapu-kwapu. Ndakanga ndaita semunhu ari kuita mapress ups ndichisvira.
Akatanga kuzvongonyoka aripasi ipapo ndichiita mashort deep thrusts. Ndakasiya makumbo aye ndochinja position iye akabva atora katowel kaye achipukuta majuices akanga azara mugambi rake nepablambi yangu. Achiri pasi kudaro, ndakapfugama ndokusimudza makumbo ake ese mudenga ndikawona gambi rake richiita kundisekerera rakabudikira panotangira zviboda zveke. Ndakandonyera mboro slowly ndikawona matinji ake akakirira akatenderedza mboro yangu. This was a very pretty sight and it made me even harder. Ndakasvira neposition iyi ndichiita zvekumboturika makumbo ake ese kuright shoulder then kuleft ndomboti one one on each shoulder, ndozomboapushira kumashure torwards musoro wake. Mwana aive flexible and makumbo
acho aive akashepeka akatsvukira zvekuti kana usati wamboappreciater musikana musi uyu waimunamata. Akazoapatsanura makumbo aye ndokundidhonzera torwards her. Ndavepakati pemakumbo aye akaakochekera kumusana ndokundisquizer nechepamusana apa. Beche rainge raaligner neblambi zvekuti chiuno changu chete ndicho chakange chakufamba. Ndakada kuibuditsa musikana akati unonyepa. Akasimukira achiitera ndokuramba akabatirira muchiuno chete. Ndakamupa zvaaida ndokuchovha ndakadaro.
Time time ndakamuita turn over ndokurara side by side takatarisana. Ndakasimudza one gumbo ndikarigadzika pahip rangu ndikatanga kuisa ndakadaro. Neposition iyi takanakirwa vakomana! Akatsunzinyira uku ndichimutsvoderera. Ndaikoira iye achirova kachikapa nepaside iwo mapubic borns edu achitamba chisveru achigumana. Ndaipuruzira boda rake ndokwidza kumagaro, ndichidarikira kumusana wake iyewo achiita the same ukuwa mazamu ake achingo rubber rubber pachest yangu. Zvakatanga kunaka kunyanya ndokubva asimudzira gumbo mudenga achikoirira kunge zvinoita vasikana vanotamba
rhumba. Ndakanzwa manyawi ndikasvira kunge ndichasvuuka hip sekuti takange takarara pasi. Ndakamuturner ndokubva arara nerimwe side andipira
magaro. Kashape kemwana uyu kainakidza mhani!. Ndakaindonyera pakavalley kanofomwa nepanosangana magaro nemathighs ikaglider mboro ichipinda nyore
nyore. Ndakatanga kutambisa matiti ake neminwe yangu yerwoko rwaive pamusoro uku ndichitinha zvinhu zvangu. Magaro ake aibva anyatsokuita cup papubic area pangu. Ndakasvira nice and slowly ndichikoirira kunge kakitsi takaita snuggle up like that. Akasimudza gumbo futi ndikasveerera maclitories ake nekumberi ndichiadhonzerera uku ndichisvira from behind. I enjoyed kutightener kwaiita gambi rake pandaitamba tamba nematinji ake. Position iyi yakange isiri sustainable though.Ndakamuvha on top of her mboro irimukati chete ndokutanga kupomba nekumashure iye ariflat pasi nedumbu. Apa dainyatso kuiti mvo-oo mukatikati zvekuti ndainyatsonzwa mboro ichirova chibereko. Ndakatanga kusvira ndichifambisa chiuno kunge ndirikuchovha basikoro. Musikana akanakirwa akasimudzira magaro achisangana neni. Takaisana kusvikira tasimukira tapinda mudoggy staira. Akanga apfugama magokora nemusoro zviripasi kunge mupositori arikunamata iniwo ndichipomba from behind. Ndakanyatsomuti mba-a nepachiuno apa ndokutanga
kupomba.Ndaiti ndikamboita malong slow strokes wonyatsonzwa mboro ichiwirirana nebeche, ndozoita mashort fast stokes wonzwa kuti urikucontroller beche nepleasure apa! Akatanga kunakirwa ndokutanga kupara-para pasi neminwe yake. Ndakamisirwa magaro musana wakaderedzwa beche rese rikauya
kwandiri.Akatanga kukapanura achikwidza nekudzikisa magaro ndikanzwa office yese ichiita kunge iriku floater mumhepo ichiita kunge irikutenderera.
Panguva iyi ndakangoindonyera mukati iye achingoikoirira chete. Akatanga kurova-rova pasi ndokutanga kukoirira kunge asvikirwa. Mboro yangu yakatenderedzwa right round ikanzvonyorwa nebeche rake ndikatanga kubuda karute. Akasweyerera machende angu ndokuaswinya swinya ganda achiatickler tickler nemalong nails ake ndakatanga kuchemerera kunge mota irikukrenkwa isina bhatiri..ndaingoti aaaa_Maaaii_Hwii_Yoo_Wee_Mai_Hwii
ndiye tsa-aa-aa, tsaa-aa, tsaaaaaaa-a-a-a-a-a. Ndichitunda kudaro musikana akabva aclimax3r futi achidaidzira kuti Oooh my…Ohhh shiiit, baiby yesss, oh yesss Nyammmmziiii-ziii-hwaaa..achingokoirira chete. Ndaiita kutunda in batches.Ndikamboti waaa-waa, ndombobvundirira mumakumbo ndoti futi waa-a ndiye waaa-a-aa, ndombogwina-gwina ndiye waaaaaa-aaaaa waaaaaa-aaa. Mabudiro ayiita sperm yangu neku kurungirwa kwandayiitwa zvakaita sekunge dzimwe nyama dzekumagaro, padumbu nemathighs dzakange dzakubudawo nesp3rm yacho nekuti gwiniro nepushiro yacho nenetero yacho yandakaita yaive yakapenga. Musikana akabva aiita week ndokucolapser nedumbu ini ndichiteerawo kumashure kwake zimboro ririmo mukati chete.
Takazorora takadaro trying to catch our breath. Chakanakidza ndechekuti kaslightest movement katayiita tazorora kudaro taibva tatanga kugwina and continue cumm1ng. Ndakatarisa Cleo ndikawana akotsirira netwimisodzi pamaziso achisekerera nekamwe kaangelic smile kekuti even nanhasi kandisekerera that way inotomira chete.
We slept like babies for hours on end as we were both tired. Zimboro harina kumboserera all that time and occassionally taimbokoirirana in our sleep and just fade out again, tomboita futi and fade out again. Zvaiita naturally zvega. Takazomuka kuma 3:30 am and I wanted another round but mumwe wangu akange akurwadziwa uye aneta. We freshened up, dressed up and left the office. Tirimumota mboro yangu yakaramba yakamira chete. Musikana akange aneta so she slept on my lap ini ndichidriver kuenda Kumba kwavo which was way out of town. Journey iyi yakanakidza nekuti munzira mose akange akazorora palap achindi blowa chete. Mwana akadya mboro nekuibonyora for almost 60kms kusvikira ndatunda. Ndakamusiya kumba kwavo ndokutanga kutambudzika on my way back home. Ndaive ndaneta zviriserious and you know kuti ukatunda more than thrice simba rose rinopera. Dai pasina kuti aive
makuseni seni kusina mota dzakawanda munzira, hameno kuti ndaipona here nenetero yemabasa emboro
Handaimbofunga kuti ndingafa ndakahurira murume wangu….
A day to remember. Inzwa kuzokurirwa nemiyedzo kwandakaita teaching pa Private College
Kubviswa humhandara naBamkuru
Next story Ndakamusvira Chipo Kuparty paMidlands State University
Previous story Sviro paFacebook season 2“The Chipo Chinake Encounter”